Manana namana vaovao ny Fanahy Vaovaon'i Afrika: Ny Biraon'ny Fizahantany Afrikana
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Manana namana vaovao ny Fanahy Vaovaon'i Afrika: Ny Biraon'ny Fizahantany Afrikana
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany momba an'i Ethiopia • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • WTN
Sary Credit Kalo Media
Ny Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) dia mandray an-tanana haingana ny fizahantany afrikanina. Ny filohan'ny ATB Cuthbert Ncube dia ao amin'ny renivohitr'i Addis Ababa renivohitra ankehitriny izay nihaona tamin'ireo mpitarika ny Ethiopian Airlines.
Ny filohan'ny komity fizahan-tany afrikanina, Cuthbert Ncube, dia any Addis Ababa amin'izao fotoana izao amin'ny fitsidihana miasa ary nihaona tamin'ny Ramatoa Mahlet Kebede, Lehiben'ny fialantsasatra ho an'ny fiaramanidina Ethiopian ET.
Rehefa mitsidika ny Ethiopian Airlines foibe, Ncube dia nandray an'i ATB Ambassadors Hiwotie Anberbir sy Kazeem Balogun.
Nanaiky ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa i Ethiopian Airlines sy ny Birao Afrikana momba ny fizahantany.
Cuthbert Ncube nilaza hoe: “Ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany dia manohana ny famerenana amin'ny laoniny sy ny famerenana amin'ny laoniny an'i Afrika ao anatin'ny fomba mirindra. Midika izany fa tsy maintsy manatratra izany miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka stratejika toa ny Ethiopian Airlines isika. Ny Ethiopian Airlines dia fantatra amin'ny maha zotram-piaramanidina mitondra ny anaram-boninahitra 'Pride of Africa.' Afaka manatratra ny nofinofin'ireo raim-pianakaviana mpanorina antsika isika amin'ny fampiraisana an'i Afrika amin'ny fampiasana fizahan-tany ho fitaovana fitaterana fiara. ”
Nandray anjara lehibe tamin'ny fampirantiana fizahan-tany momba ny fizahantany any Afrika Atsinanana 2021 vao haingana tany Arusha Tanzania, ny ATB dia vonona ny hiantoka ny fiverenan'ny fizahantany. tsy ho ela.
Kebede niteny hoe: “Amin'ny taona 2022, manantena izahay fa hampiditra ny fikambananao ao amin'ny kalandrie hetsika amin'ny sehatry ny hetsika fizahan-tany isan-karazany ao amin'ny kaontinanta.. "
“Miaraka amin'ity fiaraha-miasa ity, ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany sy ny zotram-piaramanidina Ethiopian Airlines dia hametraka paikady stratejika mba hanome sehatra fizahan-tany sy fizahantany matanjaka ao amin'ny COVID-19 vanim-potoana. COVID dia nanome anay hiverina any amin'ny tabilao momba ny fomba hampidirana ny fanao tsara indrindra amin'ny drafitry ny zavatra, "Ncube nanampy.
Misy faritra maro mahaliana ny tsirairay. Ny Memorandum of Understanding dia tokony hatao sonia eo amin'ireo fikambanana roa mba hanombohana amin'ny fomba ofisialy ity fiaraha-miasa eo amin'ity kaompania Star Alliance sy ATB ity.
Manoloana ny areti-mandringana COVID-19, i Ethiopian Airlines dia niasa mafy tamin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany isam-paritra any Afrika.
Ny orinasam-panjakana dia mpikambana ao amin'ny International Air Transport Association (IATA) hatramin'ny 1959 ary an'ny Africa Airlines Association (AFRAA) hatramin'ny 1968.
Mpikambana ao amin'ny Star Alliance i Ethiopian, nanatevin-daharana tamin'ny Desambra 2011. Ny teny filamatry ny orinasa dia Ny Fanahy Vaovao any Afrika. Ny foiben-toerany sy ny foibeny etiopiana dia ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Bole any Addis Ababa, toerana anaovany tambajotranà toerana fitaterana 125 - ny 20 amin'izy ireo dia toeran-kaleha ary 44 ny sambo mpitatitra entana.
The Birao fizahantany afrikanina dia natsangana voalohany tamin'ny taona 2018 avy amin'ny vondrona fizahantany fizahantany afrikanina any Etazonia. ATB dia monina ao amin'ny Fanjakan'ny Eswatini. Tanjon'ny ATB ny hampiroborobo an'i Afrika ho toerana fizahan-tany voalohany.
Ny Biraon'ny fizahantany afrikanina dia mpiara-miasa stratejikan'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany.